Unxibelelwano lweSelula | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: U nxi be lelwano
yiyiphi isixeko isiqalo se-841?
Sesiphi isixeko esihambelana nesimaphambili 841? Sesiphi isimaphambili onomdla kuso? Ikhowudi yomnxeba? Ingingqi ye-841 Penza (8412) xx-xx-xx Penza (84140) x-xx-xx Bessonovka (84141) x-xx-xx Bekovo (84142) x-xx-xx Vadinsk (84143) x-xx-xx I-Bashmakovo (84144) ) ...
I-Kazakhstan Embassy e-Omsk.
Umzi wozakuzo wase-Kazakhstani e-Omsk. Mholweni. Ndicela ukuba usincede intombi yam ihlale eSamara B-Chernihiv ngaphandle kwamaxwebhu ezandleni zayo isatifikethi sokuzalwa saseKazakhstan kunye nesatifikethi sesazisi ...
I-Beeline-Moscow yatshintshe imali yam yentengiso-i-2007 sms ixabisa i-10 ruble! nceda undixelele izinga elihle
I-beeline-moscow itshintshe irhafu yam yokunxibelelana ne-monster-2007 sms ixabisa iiruble ezili-10! Nceda undixelele umrhumo olunge ngakumbi 0611 ukunceda 1. Izicwangciso zerhafu yeBeeline - uluhlu lwamaxabiso olutsha olunenzuzo ... Ezona zinga zilungileyo ...
Ungatshintsha njani amanqaku kum mtshegabyte we-Intanethi?
Uwatshintsha njani amanqaku kwi-mts ye-megabytes ye-Intanethi? Ungawatshintsha njani amanqaku e-MTS kwi-Intanethi Injongo yokhetho lwenkonzo Amashumi amahlanu eMegabytes (50MB). Inani leebhonasi ezifunekayo ukwenza le nkonzo ibe ngamanqaku ali-150. Ikhowudi yenkonzo ...
Ngaba kunokwenzeka ukuthumela imali kwi-iota?
Ngaba kunokwenzeka ukudlulisa imali kwi-iota? Awunakudlulisela naphi na, uhlawule nge-yota, kwaye uThixo akavumeli ukuba ubeke imali ngempazamo, awuyi kuyibuyisa ...
Indlela yokubiza iLatvia
Indlela yokufowunela iLatvia +371 ** *** *** Iinombolo eziselfowuni eLatvia zinamanani asi-8 Amanani amabini okuqala, ikhowudi yomqhubi weselfowuni, inombolo elandelayo ye-6 yenombolo yeselfowuni Inethiwekhi yeselfowuni yeNMT93Mobile ...
kuphi iprostokvashino nedolophana? ayikho imifanekiso kodwa yinyani
iphi ilali yaseProstokvashino? hayi ikhathuni kodwa iRashiya yokwenyani, indawo yaseNizhny Novgorod, ilali yaseProstokvashino - le yinto eyaziwa yiYandex kwimimandla yaseTynda, eRostov, eMoscow naseLeningrad. I-Russia, indawo yaseNizhny Novgorod, isithili saseTonkin, ...
Abantu !!! ngubani owaziyo ukuba yeyiphi ikhowudi yomsebenzisi 351 kwaye ikummandla mni ...
Abantu !!! ngubani owaziyo ukuba yeyiphi na ikhowudi engu-351 kwaye ingowuphi ummandla okuyo ... Chelyabinsk Apha uyabona ukuba kwenzeka ntoni xa ubuza ulwazi malunga nenombolo engaphelelanga%:%: "%;! 5 ()%; Ithini inombolo ??? Ikhowudi + 7 ...
Ngubani owaziyo i-494 ikhowudi yeso sixeko?
ngubani owaziyo i-494 yikhowudi yeso sixeko? IKostroma (iRashiya) Kursk Umgca ohleliweyo - Ingingqi yeKostroma (8 494) Umgca oLungisiweyo- iAntropovo (8 49430) Umgca oLungisiweyo - iBogovarovo (8 49451) Umgca oLungisiweyo- Bui ...
Ingakanani ikhadi le-SIM? Ziziphi na ixabiso lokunxibelelana, i-intanethi, njl
Ixabisa malini ikhadi leYota SIM? Kwaye ngawaphi amaxabiso onxibelelwano, i-Intanethi, njl njl. 300 iphe. Kodwa iBeeline enexabiso layo "lokuhlawula konke" kunenzuzo ngakumbi. Kuba akaqulunqi ...
Uwuphi umehluko phakathi kokubhalisa nokubhaliswa? ndixelele inkcazo ephambili yokuhlukanisa
Uyintoni umahluko phakathi kobhaliso nobhaliso? ndixelele eyona ndlela iphambili yokwahlula .1. Umahluko phakathi kobhaliso nobhaliso. Kubomi bemihla ngemihla, amagama athi "ubhaliso" kunye "nobhaliso" asetyenziswa ngokufanayo. Nangona kunjalo, ngokwembono yomthetho, le ...
Umbuzo kwabo bahlala eSt. Yintoni ethi "lit.", "pom." Ithetha ntoni kwidilesi?
Umbuzo ngowabo bahlala eSt. Yintoni ethi "lit.", "pom." Ithetha ntoni kwidilesi? Ileta-lit, igumbi le-pom-Alphanumeric identifier esetyenzisiweyo ekulungiseleleni uluhlu lwempahla kunye namaxwebhu obuchwephesha bezindlu kunye nemibutho yeempahla (OTI), iyavumeleka ...
Tshela idilesi yeposi ye-post 125993 eMoscow
ezaposwa ngomhla 01.09.2018 18.09.2018
Ndixelele idilesi 125993 yeposi eMoscow 125993, eMoscow, eLeningradskiy, 37, A-167 GSP-3 Molo, Mikhail! Iwebsite kaMospochta YABANQANDA UBUNGQINA BESI salathisi NGOKUTSHANJE! Kulula ukubona ukuba ...
8805 ******* yimuphi umqhubi kunye nomzi?
8805 ******* ngowuphi umqhubi kunye nesixeko? Ikhowudi (8) 805 yeminxeba yekhadi ehlawulelwa Ikhowudi / uLuhlu / amandla / uMqhubi / uMmandla 8051000000100999910000 kumgama omde nakunxibelelwano lwehlabathi eRostelecomMoscow 8051010000101999910000RostelecomRussian Federation 8051100000110999910000CountryComMoscow
906 yintoni ummandla oku nceda ndixelele nceda
906 ngowuphi lo mmandla ndicela undixelele ukuba uthetha ngeselula, ke lo ngumtya, kodwa kwimimandla eyahlukeneyo e-Orel zikhona ukuba sithetha ngenombolo yefowuni +7 (906) xxxxxxx - xa ufowuna ...
Iyiphi ikhowudi ye-zip yesixeko saseKostroma? Ungajongi kwi-intanethi
Ithini ikhowudi yeposi yesixeko saseKostroma? Sukujonga kwi-Intanethi yommandla we-Kostroma I-CODES yesixeko saseKostroma ... Magistralnaya Street - 156010Mira Street - 156019Maly lane - 156002Miroslavskaya Street - 156012Malyshkovo 371 km p - ...
Ngaba i-4G incike kwi-sims?
Ngaba i-4G ixhomekeke kumakhadi e-SIM? Ilanga lilula kakhulu. ISIM khadi yakho kwi-SIZE ayizukulingana iifowuni ezintsha 🙂Vs kufuneka zitshintshwe. Kwisalon ekufutshane, tshintsha i-SIM khadi yakho, simahla, inani liya kufana ...
Yintoni ukongezwa kwefayile thumbdata3-1763508120. Ifowuni ithatha yonke indawo.
Yintoni ukongezwa kwefayile thumbdata3-1763508120. Ifowuni ithatha yonke indawo. Yintoni ifomathi yefayile yeTHUMBDATA3? Ukongezwa kwefom .thumbdata3-10 amanani angalunganga lulwandiso lwenkonzo olusetyenziswa ekusebenzeni ...
Ifowuni ye-8923, yimuphi umzi?
umnxeba 8923, sesiphi isixeko esi? Esi ayisosixeko, kodwa ngumqhubi weselfowuni uMegafon. I-Omsk Altai okanye iTomsk Malunga neefowuni zeedolophu kunye nabaqhubi kwimimandla kwiwebhusayithi telcode.su Esi siselfowuni ...
Ndixelele uxhulumaniso olufanelekileyo lweefowuni ezisuka eKazakhstan ukuya eRashiya
Khawulezisa uqhagamshelo olunenzuzo kwiifowuni ezisuka eKazakhstan ziye eRussia Yintoni ekhoyo nge-11 tenge (abamelwane) -ukuqala ngomzuzu wokuqala nowokugqibela. 30 tenge inye. Ukusukela ngoFebruwari 2016 bendithetha nje ...
Imibuzo ye-81 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,913.